Tidal dia nanambara ny fanombohana ny fampiharana azy manokana ho an'ny smartwatches Samsung | Androidsis
Androany, Spotify no sehatra fandefasana mozika malaza manerantany, cmiaraka amin'ireo mpampiasa maherin'ny 87 tapitrisa sy mpampiasa 110 tapitrisa amin'ilay kinova maimaimpoana miaraka amin'ny doka. Amin'ny laharana faharoa dia mahita Apple Music isika miaraka amin'ireo mpampiasa latsaky ny 50 tapitrisa. Amin'ireo serivisy mozika streaming sisa, tsy manana tarehimarika fampiasana ofisialy izahay.
Iray volana lasa izay, Spotify dia nanambara ny famoahana kinova iray an'ny Spotify feno ho an'ny akanjo entin'ny Wear OS, vaovao tsara ho an'ireo mpampiasa an'ireo fitaovana ireo. Andro vitsy lasa izay, nanambara ny fanombohana ny kinova amin'ny serivisy mozika streaming ho an'ny Apple Watch io orinasa io ihany. Toa izany izao anjaran'i Tidal.
Ny orinasan'i mangatsiatsiaka an'ny indostrian'ny mozika, vao avy nanambara fa ny smartwathes sy ny akanjo azo entina amin'ny ankapobeny vokarin'i Samsung ary tantanan'i Tizen dia izao manana ny fampiharana azy ireo eo am-pelatanany hahafahany mankafy sy mitantana serivisy mozika atolotra ho an'ireo mpampiasa rehetra amin'ity sehatra ity na amin'ny smartwatches Samsung.
Izany no ho Fampiharana voalohany an'i Tidal ho an'ny fitaovana azo ampiasaina, Fanapahan-kevitra izay manaitra indrindra, satria tsy nifidy ny Apple Watch na ny ekosistra Wear OS handefa azy io ry zalahy ao Tidal. Ity fampiharana ity dia azo alaina amin'ny Samsung Galaxy Watch, Galaxy Gear S3, Galaxy Gear S2, ary Galaxy Gear Sport. Ho fanampin'izay, azo ampiasaina ihany koa izy io ho an'ny Gear Fit 2 Pro sy Gear Fit 2.
Raha mankafy ny serivisy mozika streaming an'i Tidal ianao ary manana smartwatch tantanin'i Tizen ary ao anatin'ity lisitr'ireo terminal ity dia azonao atao izao ny misintona ny rindranasa avy amin'ny fivarotana app an'ny koreana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Tidal dia nanambara ny fanombohana ny fampiharana azy manokana ho an'ny smartwatches Samsung
Ny Google Pixel 3 dia mitohy manana olana: ankehitriny be loatra ny rano ary mikatona rehefa mamaly
Ochontera estetika ho an'ny GlowGrid 2, piozila nentin'i Tetris